'यति सानो उमेरमा किन भारी बोक्न थालेको ? ' मैले सोधेँ ।'हामीले भारी नबोके खान पाइँदैन ।' निर्मलाले निधारको पसिना पुछ्दै भनिन् ।'अनि स्कुल जानुपर्दैन त ? ' मैले फेरि सोधेँ ।'जानुपर्छ । बिदामा मात्रै भारी बोक्ने हो ', निर्मलाले फेरि गालाको पसिना पुछ्दै भनिन् ।'अनि तिमीहरूको बुबाआमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि ? ' मैले एकछिन रोकिएर फेरि सोधेँ ।'कहिले रक्सी खाएर घरमै बस्नुहुन्छ । अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गाउँमा माग्न जानुहुन्छ ।' निर्मलाले अलिकति लजाउँदै भनिन् ।
उनीहरू फेरि भारी बोकेर हिँड्न थाले । म पनि उनीहरूको पछिपछि लागेँ ।'तिमीहरूले कमाएको पैसाचाहिँ के गर्छौं नि ? ' हिँड्दाहिँड्दै मैले सोधेँ ।'बुबाआमाले लिनुहुन्छ । अलिअलि चाहिँ लुकाएर राख्छौं । किताब, कापी र कलम किन्नलाई चाहिन्छ नि', यसपटक चाँदनीले भनिन् ।'बुबाआमाले चाहिँ काम गर्नुहुन्न त ? ''अहँ, गर्नुहुन्न । रक्सी खाएर मातेर बस्नुहुन्छ ।''किन नि ? ''हामीले भारी बोकेर हाम्रा बुबाआमालाई पाल्यौं । अब तिमीहरूले हामीलाई पाल्नुपर्छ । तिमीहरूलाई तिमीहरूका छोराछोरीले पाल्नेछन् भन्नुहुन्छ', शान्तिले भनिन् ।'ओहो, कस्तो नराम्रो सोचाइ । अनि रक्सी खाएर मातेर बस्ने कस्तो नराम्रो बानी । यस्तो सोच्नु हुँदैन । काम त सबैले गर्नुपर्छ । अनि रक्सी खाने बानी पनि छोड्नुपर्छ । अब तिमीहरूले नै बुबाआमाको काम नगरी बस्ने र रक्सी खाने बानी छुटाउनुपर्छ ।
सपनाको भारी गरुंगो हुँदैन, हलुको हुन्छ । सुखको भारी हलुको हुन्छ । दुःखको भारीमात्रै गरुंगो हुन्छ ।बुबाआमाको रक्सी खाने बानी छुटाउन के गरे त उनीहरूले ? मलाई जान्ने उत्सुकता लाग्यो र सोधें, 'कसरी तिमीहरूले बुबाआमाको रक्सी खाने बानी छुटायौ त ? '
'एक दिन हामी सबैले आआफ्नो बुबाआमासँग घुर्की लाउने सल्लाह गर्‍यौं', निर्मलाले भनिन् ।'कस्तो घुर्की ? ' मलाई जान्ने खुल्दुली लाग्यो ।'रक्सी खाने घुर्की । भन्यौं, तपाईंहरू रक्सी छोड्नुहुन्न भने हामी पनि रक्सी खान्छौं ', सिर्जनाले भनिन् ।'अनि त्यसपछि... ? ' मेरो खुल्दुली झन् बढ्यो ।
त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो, ' तिमीहरूले रक्सी खानुहुन्न ।' 'अनि हामीले खान नहुने रक्सी तपाईंहरूले चाहिँ किन खानुभयो त भनेर भन्यौं । त्यसपछि उहाँहरूको चेत खुल्यो । अनि रक्सी खान छोड्नुभयो । अहिले त हाम्रो सट्टा उहाँहरू आफैं भारी बोक्नुहुन्छ ', चाँदनीले खुसी हुँदै भनिन् ।सुनेर मलाई पनि खुसी लाग्यो । कहिलेकाहीँ केटाकेटीको घुर्कीले पनि राम्रै परिणाम दिँदोरहेछ । अब निर्मला, चाँदनी, सिर्जना, मेलिना, शान्ति, सुशीला र सुनीताको सपना क्रमशः पूरा हुँदैछ ।